दुबईमा कोरोना उपचारमा संलग्न यि माहान नेपाली नर्स : जसले उपचारमा खटिँदा घर परिवार भनिन्न – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/दुबईमा कोरोना उपचारमा संलग्न यि माहान नेपाली नर्स : जसले उपचारमा खटिँदा घर परिवार भनिन्न
यूएई – ‘यू आर आवर सोल्जर अर्थात हाम्रो राष्ट्रको सेवामा खटिएकी तिमी नौजवान हिरो हौं,’ रुपन्देहीकी ३३ वर्षीया गंगा खनाल ढकालको इमेलमा आबुधावीका युवाराज मोहमम्म्द बिन जायदबाट आएको सन्देश हो यो ।
परदेशी भूमिमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएकी गंगालाई युवराजको यो सन्देशले छाती चौडा भयो । खुशीले गदगद हुनुभयो । आफूले गरिरहेको कामको प्रशंसा पाउँदा, आफू खुशी भइरहँदा हप्तौंदेखि कोठामा एक्लै छाडेको छोराले के सोच्यो होला ? आमा खै भनेर कति सम्झियो होला ? सम्झेर मन चसक्क भयो ।
यूएईको रजिस्टर नर्स गंगा यहाँ बु्रजेल अस्पतालको आईभीएफ (टेस्टट्युब बेबी) विभागमा चार वर्षदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ । यो अप्ठेरो परिस्थितीमा उहाँले आफ्नो छोरालाई २७ दिनसम्म श्रीमानको साथमा छाडेर कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिंदा मन नआत्तिएको कहाँ हो र ? तर उहाँलाई लाग्यो, ‘यो बेला घरमा भएको छोरालाई भन्दा अस्पतालमा कोरोनासँग लडिरहेका बिरामीहरुलाई आफ्नो खाँचो छ ।’
चार वर्ष भयो गंगाले यूएईको रजिष्टर नर्सको रुपमा काम गर्न थालेको । महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसबाट बीएससी नर्सिङ गर्नुभएको हो । संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएईको अलऐनमा उहाँको परिवार नै बस्नुहुन्छ । श्रीमान अलऐनकै एउटा विदेशी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ । छोरा र श्रीमानसहित परदेशी भूमिमा बस्दा जीवन सामान्य रुपमा चलेकै थियो ।
चीनबाट फैलिएको कोरोनालाई सीमाले छेकेन । यूएईमा पनि सङ्क्रमण देखिन थाल्यो । सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि उहाँलाई अस्पताल प्रशासनले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिन प्रस्ताव गर्‍यो ।
परदेशी भूमि । कोरोनाको जोखिम । अनि आमा भन्दै पछि लाग्ने सानो छोरो । मनको सुनौं कि दिमागको ? निर्णय गर्न सजिलो थिएन । तर उहाँको अलमललाई प्रष्ट पार्न श्रीमानले सघाउनुभयो, हौसला दिनुभयो ।
‘कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने आँट र निर्णय त मेरो हो,’ गंगा भन्नुहुन्छ, ‘तर श्रीमानले साथ नदिएको भए यो सम्भव थिएन, उहाँले मलाई निर्णय गर्ने बेलामा होस् या काममा छँदा मेरो आत्मबल बढाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन ।’